Christine Lagarde oo loo doortay agaasimaha sunduuqa lacagta adduunka IMF – SBC
Christine Lagarde oo loo doortay agaasimaha sunduuqa lacagta adduunka IMF
New York:-Golaha sunduuqa lacagta adduunka IMF ayaa u doortay wasiirka maaliyadda Faransiiska haweenayda lagu magcaabo Christine Lagarde agaasimaha cusub ee sunduuqa lacagta iyadoo bedeli doonto Dominic Strauss Khan, kaasi oo iscasilay bishii la soo dhaafay kadib markii lagu eedeeyey fadeeexad la xiriirta isku day in uu kufsado gabar magaaalada New York.
Guusha haweenaydan ayaa la xaqiijyey kadib markii ay shaaca ka qaadeen dalalka China, Russia iyo Brazil in ay taageerayaan iyo mareykanka oo ku dhawaaqay in uu taageerayo saacado ka hor kulanka golaha IMF ee ka kooban 24 xubnood.
Bayaan ka soo baxay sunduuqa lacagta adduunka ayaa waxa lagu yiri ” goluha fulinta sunduuqa lacagta adduunka IMF waxa uu doortay madaxa golaha fulinta muddo shan sano ah oo ka bilaabanaysa 5 July 2011″.
Dhankeeda Christine Lagarde ayaa ku carabaabtay fariin la soo dhigayey website-ka xiriirka bulshada Twitter dareenkeeda iyo sida ay ugu faraxsan tahay qabashada jagadan.
Majirin cid kale oo kula tartamaysay haweenaydan marka laga reebo xaakimkii bangiga dhexe ee Mexico ninka lagu magcaabo Ogistin Christanis .
Labada murashax ayaa bilaabay ololohooda iyagoo safaro ku tagaya meelo badan oo caalamka kamid ah ka hor inta aysan la kulmin xubnaha golaha maamulka sunduuqa lacagta adduunka IMF.
Haweenaydan ayaa ahayd wasiirka maaliyadda dalkeeda tan iyo 2007.
Warbixinada ayaa tilmaamaya in haeenaydan farasniiska ay ku guuleysatay taageerada Russia iyo mareykanka saacado yar ka hor inta aan la magcaabin.
Khubarada dhaqaalaha ayaa u arka in dhibaatada deymaha dalka Giriiga ay noqon doonto mudnaanta koowaad ee howlaha hor yaal Christine Lagarde bilowga madaxtinimadeeda sunduuqa lacagta adduunka IMF.